Mapisarema 37 Zvinoreva Vhesi Ndima | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero Mapisarema 37 Zvinoreva Ndima Ndima
Nhasi tichave tichidzidza bhuku rePisarema 37, iro rinoreva ndima nendima. Mapisarema anotaura pamusoro pechakavanzika chevakaipa nevatendeka. Ishe vanonzwira tsitsi vanhu vake kunyangwe akakomberedzwa nevavengi. Iri pesimba rine simba rinotiudza magumo uye kwekupedzisira kuenda kwevakaipa, inoshanda seyambiro yekurumbidza vakarurama kuti varege kuodzwa moyo nekuwedzera kwezvakaipa. Patinenge tichidzidza iri pisauko 37 zvichireva kubva mundima kusvika kune imwe, Ishe vanozovhura meso ako kune hupfumi hwakawanda hwakavanzika mushoko rake nhasi muzita raJesu Kristu.
PSALM 37 KUTSANANYA VESE YEMAHARA.
Ndima 1: Usava neshungu pamusoro pevanoita zvakaipa, Uye usagodora vanoita zvakaipa.
Mapisarema anovhura ne chirevo chekusafunganya. Ishe vanoziva kuti zvakajairika pakati pevanhu vake kuti vangatuka uye vagodze vapfumi nevakuru kunyanya munguva dzekutambudzika. Iye, saka, anovakurudzira kuti vasanetseka sezvo Iye akarurama pane zvese zvaAnoita.
Ndima 2: Nekuti vachakurumidza kudzurwa souswa, vooma semuriwo mutema.
Pachauya nguva apo kuparadzwa kwevasingatendi kuchamuka. Panguva iyoyo, kubwinya kwevakaipa kunopera. Hapana chaizoitwa kudzikinura chinguva chakadai. Saka sei mutendi achifanira kuitira shanje hupenyu hwakadai hunouya nekukurumidza kupera kana kuti gare gare?
Ndima 3: Vimba naJehovha, uite zvakanaka, uchagara munyika, uye uchafudzwa.
Kutenda kwedu muna She kunoenda kure kure kurapa kutambudzika uye kusuwa. Nenzira imwecheteyo, chiitiko chekuita zvakanaka chinoporesa. Kuti isu tigare munyika naMwari, kuperera, uye kutenda ndizvo zvakakosha.
Ndima 4: Zvifadze muna Jehovha, uye iye agokupa zvinodikanwa nomoyo wako.
Apa anozopa zano kuti vatendi vazadzwe nemufaro nashe. Muhupenyu huno, kana isu tina Mwari, hapana chikonzero cheku kunetseka chero munhu anofarira muna Mwari anowana chikomborero chakawanda
Ndima 5 & 6: Isa nzira yako kuna Jehovha; vimbai naye, uye achazviita. Uye iye achavigira kururama kwako sechiedza, uye kutonga kwako masikati.
Kanda kutya kwako kuna She uye uzviise zvizere kuda kwake uye isu tichave kusvika pamusoro pehupfumi hwedu. Kunyange pakati penjodzi, ishe anopenyesa chiedza chake uye rima rekusuwa rinopera.
Ndima 7: Zorora kwazvo muna Jehovha, umurindire unyerere, usazvidemba pamusoro peiye unofambiswa panzira yake, nekuda komunhu unogadzira mano akaipa kuita.
Kune munhu nguva yakakosha asi tome haisi chinhu kuna Mwari. Iye akakosha kumirira. Haana kunyanya kunonoka kana kunonoka. Usanyengedzwe nezvinhu zvakanaka zvepasi rino zvinozopera, asi mirira chipikirwa chake.
Ndima 8 & 9 Rega kutsamwa, urege kutsamwa, usazvidemba kuti uite zvakaipa. Nekuti vanoita zvakaipa vachabviswa, asi avo vanomirira kuna Jehovha, vachagara nhaka yenyika.
Hasha chirwere chinotitadzisa kubva pana Mwari. Saka sevaKristu, tinofanira kuzviuraya. Pasina chero mamiriro ezvinhu isu hatifanire kuzvibatanidza mukuita kwekuipa. Nekuti kutonga kwevakaipa ndirwo rufu. Asi ani naani anomirira nokushivirira pana Mwari achagara nhaka yenyika.
Ndima 10: Kwasara chinguva chiduku, akaipa haachazovipo; Zvirokwazvo, iwe uchacherekedza zvakanaka paaigara, asi haachazovapo.
Kupfupika kwehupenyu kunoita kuti tione kuti vakaipa nepfuma yavo vanoparara sei. Kutevera Kutongwa kwaIshe, imba yake ichave isina chinhu sechinhu chero chipi zvacho uye iye achaparadzwa kubva pamusoro penyika.
Ndima 11: Asi vanyoro ndivo vachagara nhaka yenyika; vachazvifadza nezvakawanda rugare.
Nechikonzero chakakodzera, kunyangwe kana vatendi vakatambura nenhamo huru iyo mufaro wavachazowana ichafukidza kurwadziwa kwavo. Mutsara unogara nhaka yenyika unoreva kuti chivimbiso chaIshe chinozadziswa uye iye achaponeswa kubva mukutongwa kusingaperi.
Ndima 12-15 Wakaipa anorangana pamusoro peakarurama, uye anomugomera pameno ake.13.Ishe achamuseka, nekuti anoona kuti zuva rake rinouya.14Vakaipa vakavhomora munondo, vakapfugama uta hwavo, kuti vawisire pasi varombo nevanoshaya, nekuuraya vakaita sekutaurirana kwakaringana. 15Pfumo ravo rinozopinda pamoyo yavo, uye uta hwavo huchavhuniwa.
Hunhu hwevakaipa kuparadza. Ichi chinhu chimwe chakaitwa kunaIshe wedu Jesu Kristu zvakadaro haana kugumbuka mazviri asi akatora kukuvara nemoyo murefu. Vavengi vachasvika padyo nepasi kuti vaparadze hupenyu hwedu asi rangarirai nekutenda kwakanaka kuti zuva raIshe riri kuuya apo matafura achashanduka iwe uchakunda nyika sezvakaitwa naJesu.
Ndima 16: Zvishoma, zvakanaka, zvowakarurama zvinopfuura pfuma yevakaipa vazhinji.
Kune mufaro uye mufaro mune zvidiki zvemurume akanaka achienzaniswa nehupfumi hwewakaipa nekuti pane kugutsikana uye kuzadzikiswa
Ndima 17: Nekuti maoko avakaipa achavhuniwa, asi Jehovha anotsigira vakarurama.
Kushingairira kwevakaipa kuita zvakaipa kuchagurwa nekuti ivo vanosimudza maoko avo kuna Mwari. Iye uchavapwanya-pwanya pfupa, asi iye wakarurama, uchavabatsira nekusingaperi.
Ndima 18: Jehovha anoziva mazuva avakarurama, uye nhaka yavo ndeyokusingaperi.
Ishe vanozvibata zvavo sevagari venhaka yeruponeso. Hapana chakaipa chichavawira nekuti anovafambisa munzira yose. Zvakare, kusaguma kunovimbiswa.
Ndima 19: Ivo havanganyadzisi panguva yakaipa, uye pamazuva enzara ivo vanogutiswa.
Njodzi dzinouya dzichienda, zvakafanana njodzi uye kuomerwa. Asi kununurwa kunouyawo. Kana tine kutenda muna Mwari, hatifanire kuzvinetsa kuti todya chii kana kuti tichapona sei. Iye ishamwari inoshayiwa uye zvechokwadi. Zvese zviri mumaoko Ake
Ndima 20: Asi vakaipa vachaparara, uye vavengi vaJehovha vachaita samafuta emakwayana. vachaputa utsi.
Ivo vanodada nematare avo uye negoridhe pachave nenguva iyo zvese izvi zvichanyangarika uye zvichishanduka kuve rima rose. Ivo vachapera kubva pakubwinya kwavo nekuzvikudza kwavo. Sezvinoita makwayana echibayiro anopedzwa nemurazvo, iwo achapera.
Ndima 21 & 22: Akaipa anokwereta, asingaripizve; Asi akarurama ane tsitsi, anopa. Nekuti vanokomborerwa naye vachagara nhaka yenyika, uye avo vanotuka pamusoro pake vachabviswa.
Rugwaro runotsanangura mibayiro yekuve unopa unofara. Mararamiro akaipa ekurasa tsvina anowanzovasvitsa pasi ivo vakarurama avo vakatowana tsitsi vanopa netsitsi. Iye anopa, anoramba achibudirira uye haambozvikweretesi.
Ndima 23 & 24 Nhanho dzemurume akanaka dzinodzidziswa naJehovha, uye anofarira nzira yake. Kunyange akawa, haangawiswi pasi, nekuti Jehovha anomutsigira noruoko rwake.
Matanho ese atinotora akagadzwa naMwari. Kunyangwe isu tichigona kudzokera kumashure munzira, ane chokwadi chekutibatsira. Kunyangwe mukudengenyeka uye nekutadza kweMutsvene, anogara mukamuri yekudya.
Ndima 25 & 26: Ndakanga ndiri mudiki, zvino ndakwegura; Kunyange zvakadaro handina kuona akarurama akasiiwa, Kana vana vake vachipemha chingwa. Anogara ane ngoni, anokwereta; uye vana vake vanokomborera.
Ndima iyi ndeyekutarisa kwaDavid iyo inosimbisa kuti Mwari haambosiyi vake. Ndiye Mwari anopa mubayiro mabasa akanaka ababa mukubudirira kwemwanakomana wavo.
Ndima 27 & 28: Ibva pane zvakaipa, uite zvakanaka, Ugare zvakanaka narinhi. Nekuti Jehovha unoda zvakarurama, Haasii vatsvene vake; anochengetwa nokusingaperi, asi vana vavakaipa vachatemwa.
Sevatendi, hatifanire kuitira godo vanoita zvakaipa. Kureva kuti, hatifanire kupindira mune zvakaipa zviitiko asi isu tinofanira kuita zviito zvakanaka
Ndima 29 & 30: Vakarurama vachagara nhaka yenyika, Vachagaramo nokusingaperi. Muromo wowakarurama unotaura huchenjeri, uye rurimi rwake runodudzira kutonga.
Sevadyi venhaka yaKristu, vakarurama vachagara nhaka yenyika nekuti kutaura kunovaka kunobuda mumuromo wevanhu vakanaka. Anotsigira vatongi uye akasunga huso nekusatendeka.
Ndima 31: Murayiro waMwari wake uri mumoyo make; tsoka dzake hadzizotsvedza.
Ndiye muchengeti wemutemo waMwari. Kunyangwe mamiriro ezvinhu angamuka anogona kutungamira kuchinjiro mumitemo yenyika. Asi zvakadaro anoita zvakanaka kuchengeta kumutemo Mwari waMwari uye asingatombobva pauri.
Ndima 32 & 33: - Akaipa anovandira akarurama, Achitsvaka kumuuraya. Jehovha haangamuregeri muruoko rwake, Kana kumupa mhosva kana atongwa.
Dai pasina nyasha dzaMwari, vavengi vangadai vakaparadza vakarurama. Zvisinei haazombosiya waanoda. Anovanunura panguva yavanotadza kuzvinunura;
Ndima 34: - Mirira Jehovha, urambire panzira yake, Iye achakukudza kuti ugare nhaka yenyika; Kana vakaipa vachiparadzwa iwe uchazviona.
Semukristu, ikodzero yedu kumirira nemwoyo murefu uye nekuteerera kunaIshe. Sekutaura kwakaita Bhaibheri, uyo anotsungirira kuna Jehovha achaponeswa. Ani naani anovimba naIshe anozoona kana vavengi vazogurwa uye achafarira zvinhu zvepanyika nedenga.
Ndima 35: Ndakaona vakaipa pasimba guru, uye vachizvikudza somuti munyoro wedondo. Kunyange zvakadaro akapfuura, onei asipo, ndakamutsvaka, asi akashaikwa.
Zvakare munyori wepisarema anorondedzera maonerwo aakaita vakaipa vachitonga pasi asi asi tarisai, haana kwaakawanikwa. Mazita evari mumuromo wemunhu wese akakanganikwa asi mazita evatendi achirangarirwa nekusingaperi.
Ndima 37: Cherekedzai munhu akakwana, mutarire akarurama, nekuti kuguma komurume uyo rugare.
Mushure mekunge atarisa kudonha kwevakaipa, anotora nguva yake kuti adzidze vakarurama. Anoona kuti kuguma kwevakarurama rugare.
Ndima 38: Asi vadariki vachaparadzwa pamwe chete, kuguma kwevakaipa kuchabviswa.
Ndima iyi inopfupikisa chokwadi chekuti kuparadzwa kwakajairika kwakamirira vese vanoita zvakaipa.
Ndima 39 & 40 Asi kuponeswa kwavakarurama kunobva kuna Jehovha; Ndiye nhare yavo panguva yokutambudzika. Asi Jehovha achavabatsira, nokuvarwira; achavarwira panavakaipa, nokuvaponesa, nekuti vanovimba naye.
Pakupedzisira, Ishe vachapa ruponeso rwakarurama. Iye achachengetedza mudiwa wake kubva kuvavengi vavo nekuti vanovimba naMwari. Nepo dambudziko richipidigura vakaipa, vakarurama vanosimbiswa kuburikidza nekutenda.
NDINODAI KUTI NDISHANDZE KUSHANDISA IYO PSALM?
Paunenge uchinzwa kuti wave kuda kukurirwa nevavengi vako.
Kana iwe uri panguva yakaoma uye iwe uchida kuti Mwari akununure
Kana iwe uchifanira kupa mararamiro ako kuna Ishe
Kana iwe uchida kuti Mwari vavake kuvimba kwako maari
PSALM 37 MINYENGETERO:
Kana iwe uri mune chero eaya mamiriro akanyorwa pamusoro kana anopfuura, ipapo aya ane simba pisarema 37 minamato ndeyako:
Ishe, ndinobvuma kukanganisa kwangu kwamuri (munogona kuzvitaura) uye ndinokumbira kuti mundiregerere zvivi zvangu zvizere muzita raJesu.
Baba Vekudenga, ndinoisa hupenyu hwangu mumaoko enyu, nditungamire uye munditungamire muzita raJesu
Ishe, ndiitei vakarurama kuti ndigone kugara nhaka yenyika.
Ishe bvisai mweya wetsvina mukati mehupenyu hwangu uye uswedere pedyo newe.
Previous nyayaMapisarema 32 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
inoteveraMapisarema 40 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
julio Kukadzi 17, 2021 At 12:02 pm
El Señor Jesucristo Reyes te bendiga en este Ministerio precioso, amado Hno. Ikechukwo estoy muy a gusto de haberlo encontrado el mensaje basado en Psalms 37, Estoy en oración matutino ya casi un Año, por motivos peculiares de mi persona, pues mis padres me enseñaron en evocaleses tales como la oración hay que consultar a Dios en su palabra eso lo llama él "Promesa". Esto es lo que hice y salió el Mapisarema 37:27. y así le ubiqué este trabajo: CHIMBIA 37 SIGNIFICADO VERSO POR VERSO. Pastor ore por mi, y espero que el Señor muestre mis problemas antes que le cuente. mi Nombre es julio Arroyo (soy de Huancavelica-Perú)
Felix Chikumi 14, 2021 Panguva ya8: 14 pm
Hola Julio Arroyo, de huancavelica-Peru, oro por ti, for tu familia, por huancavelica y por el Peru, en estos tiempos. Porque ?? Hoy estamos viendo fraude electoral, a favor de Pedro Castillo, y eso no es correcto. Oramos para que Peru, sea un pais democratico, con libertad y con riqueza espiritual para gloria de Dios, por eso creemos en el nombre de cristo jesus, paridza ganador Fuerza Yakakurumbira inomiririra Keiko Fujimori, y la ideologia de izquierda radical, comunista de rusia, china, cuba, de venezuela… Hakuna imwe nyika muPeru… Oramos por la misericordia y gracia de Dios a favor de Peru, y esue of Espiritu Santo dando victoria a Fuerza Popular y el JNE y los Tribunales Especiales Electorales No hagan fraude en los Votos de Keiko F. Ameni.
Minamato yekupokana nebonde muchiroto
Pfungwa dzeminamato pakushandisa Ropa raJesu SeZombo